Fiolonana - Wikipedia
Ny fiolonana na mahaolona dia taranja akademika izay mandalina ireo endrika isehoan' ny fiarahamonina sy ny kolontsain' ny olombelona. Amin' izao fotoana izao, ny fiolonana dia voafaritra matetika ho sehatra fianarana ivelan' ny fiofanana amin' ny asa sy ny matematika ary ny siansan' ny zavaboary sy ny siansa sôsialy na siansan' ny fiarahamonina.
Mampiasa fomba fiasa mitsikera, na manao tombantombana ny fiolonana, ary manana singa ara-tantara manan-danja -- izay miavaka amin' ny fomba fijery ara-panandramana, indrindra amin' ny siansan' ny zavaboary, nefa tsy toy ny siansa, satria tsy manana taranja foibe. Ny fiolonana dia ahitana ny fandalinana ny fiteny taloha sy môderina, ny literatiora, ny filôzôfia, ny tantara, ny arkeôlôjia, ny antrôpôlôjia, ny jeôgrafian' ny mahaolona, ny lalàna, ny fivavahana ary ny zavakanto.
Ny taranja momba ny olombelona toa ny tantara sy ny fandalinana ny vakoka ary ny antrôpôlôjian' ny kolontsaina dia mandalina lohahevitra, izay tsy mampihatra ny fomba fiasa misy fanandramana, fa ny fomba fiasa sy fikarohana misy fampitahana no tena ampiasainy. Ny hermeneotika sy ny fitsikerana loharano no fomba fiasa hafa ampiasaina amin' ny fiolonana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiolonana&oldid=1040671"
Voaova farany tamin'ny 2 Desambra 2021 amin'ny 10:20 ity pejy ity.